राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झ्ड्कैझड्का......? - HAMRO YATRA
राष्ट्रपति ट्रम्पलाई झ्ड्कैझड्का......?
एजेन्सी, फागुन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लिनले राजीनामा दिएका छन् । रुससँगको सम्बन्धका कारण आलोचनामा आएका फ्लिनले मंगलबार राजीनामा दिएको राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
फ्लिनले ट्रम्पले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी समहाल्नुअघि रुसका राजदूतसँग अमेरिकाले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धका बारेमा कुरा गरेको अमरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । यही कारण उनीमाथी राजीनामाका लागि दबाब परेको परेको हो । अमेरिकाको विदेश नीति अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले कुटनीतिक विषयमा छलफल गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । डेमोक्र्याटिक पार्टीका धेरै शीर्ष नेताले फ्लिनलाई बर्खास्त गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पलाई दबाब दिएका थिए ।
राष्ट्रपतिको सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सुरक्षाका विषयमा सल्लाह दिन्छन् । फ्लिनको बचाउ गर्दै उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले प्रतिबन्धका विषयमा कुराकानी नभएको दावी गरे ।
तर गएको हप्ता अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले गुप्तचर विभागलाई उद्धृत गर्दै फ्लिनले रुसी राजदूतसँग प्रतिबन्धका बारेमा पनि कुरा गरेको खबर छापेका थिए । त्यसपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए ।
ट्रम्प प्रशासनका लागि यो दोस्रो ठूलो झड्का हो । यसअघि मुस्लिम बाहुल्य सात देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने सम्बन्धी राष्ट्रपतिको आदेशलाई अमेरिकी अदालतले निलम्बित गरेको थियो ।